Semalt: I-Content Scrapers. Indlela Yokufumanisa Ngubani Ubamba I-Content Yakho
yonke into malunga neziqulatho zomxholo. Qaphela ukuba i-content scrapers inokukopisha okanye ibambe into yakho yewebhu kwiiblogi zayo zangasese ngaphandle kwemvume. Ezinye zezinto eziqulathwe ngumxholo nje zikopisha kwaye zinamathisele izithuba zakho zeblogi ngexesha lonke, ngelixa abanye basebenzisa iinkqubo ezizenzekelayo ukuba bathathe umxholo kwi-RSS feeds baze bayishicilele kumawebhusayithi abo. Apha siza kuchaza indlela yokufumanisa ngubani oba nomxholo wewebhu kunye nawaphi amanyathelo okumele uwathathe ngawo.
Indlela yokufumanisa ukuba isayithi lakho lichithwa:
Ngaphandle kokuba ungakhange uphendule isihloko sakho seposi kwi-Yahoo, Bing okanye i-Google, awukwazi ukulandelela phantsi iiwebhsayithi eziba umxholo wakho rhoqo. Ukuba ukhangele ukuba wazi malunga nabo ugaxekile ngamanki okanye abahlaseli, ungazama nayiphi na le ndlela.
Yindlela elula kwaye elula yokufumana ngubani oba nomxholo wakho kwi-intanethi. Le nkqubo ikuvumela ukuba ufake ii-URL zomxholo wakho wewebhu kwaye ufumane iikopi zayo kwiWebhu Yehlabathi. Ungasebenzisa inguqulo yaso yamahhala kunye nenketho engaphelelwanga okanye inguqulelo ye-premium evumela ukuba uhlole i-web pages engama-10 000 ngamabhakethi ambalwa.
2. Imizila yokulandelela:
Unokuzama kwakhona ukulandelwa kweewebhusayithi yakho yeWindowsPress ukuze uchonge kwaye uchithe phantsi ii-sites ezithatha umxholo wakho phantse nsuku zonke. Ukuba usebenzisa i-Akismet, ezininzi zee-trackbacks ziya kuboniswa kwifolda yakho yogaxekile. Isihluthulelo sokuchonga nokufumana umzila we-trackback ukubandakanya izixhumanisi zeposi yakho kunye neetekisi ezinkulu zesikhombi. Ukuqhagamshelana kwangaphakathi nangaphandle kubalulekile ekuqinisekiseni indawo yakho.
3. Iifayile zeWebmaster:
Enye indlela yokufumana i-scrapers yokuqukethwe usebenzisa iWebmaster Tools. Yiya kwiWebhu> Izixhumanisi zeakhawunti yakho ye-Google Analytics kwaye uklikhele kwikholam e-LinkedIn. Nayiphi i-website edibanise izithuba zakho iza kuboniswa kule ndawo. Ukufumana izixhumanisi zakho kule ndawo, kufuneka ucofe kwi-domain kwaye ufumane iinkcukacha zeziphi amanqaku kwiwebhusayithi yakho eyebiwe kude. Apha uza kukwazi ukubona ngokukhawuleza ukukopisha kunye nokunamathisela izihloko zakho zeposi kunye nomxholo imihla ngemihla.
4. Izaziso zeGoogle:
Ukuba awuzange uthumele rhoqo kwaye ukhangele ukuqhubeka kunye naluphi na ukukhankanywa kwezithuba zakho zeblogi okanye amanqaku kwamanye amasayithi, kufuneka udale izilwanyana zeGoogle usebenzisa umdla ochanekileyo wamaqonga akho ukubeka kwiimpawu zokucaphulwa.
Yenza iNgxowa-mboleko yePosenti ecweyo:
Ukuba udale indawo ye-WordPress, kufuneka uzame i-plugin ye-RSS footer. Ivumela abasebenzisi ukubeka iziqwenga zesiqhelo zesicatshulwa sakho esiphantsi okanye phezulu kwiphepha le-RSS feed. Yaye ukuba ungenayo indawo ye-WordPress, kufuneka uquke nje inkcazo emfutshane okanye inqaku apha ngasezantsi okanye phezulu kwinqulatho yakho equlethe ulwazi olufanayo kwaye kufuneka ibhekiswe kakuhle.
Indlela yokuMisa ukuCandwa kweNkcazo?
Ukuba awufuni umntu ukuba aphange okanye akopishe umxholo wakho wewebhu, kufuneka uthathe amanyathelo ambalwa. Okokuqala, kufuneka uqhagamshelane nomlawuli wesayithi kwaye umcele ukuba athathe iphepha apho umxholo wakho wewebhu ukopishwa. Unokumkholisa ukuba athathe loo maqumrhu asuswe ngoko nangoko.
Ukuba akukho zindlela zokudibanisa nomlawuli, kufuneka wenze i-Whois Lookup ukufumana ngubani ophethe lewebhu okanye igama lesizinda. Ukuba ayibhaliswanga ngasese, ufumane idilesi ye-imeyile yomlawuli ngokulula. Ngaphandle koko, unokuqhagamshelana neGoDaddy okanye i-HostGator kwaye ubazise ukuba iwebhusayithi okanye igama lesizinda ngokubhekiselele liloba i-intanethi yakho kwaye kufuneka isuswe okanye imiswe ngokukhawuleza.
Ekugqibeleni kodwa kungengona mncinci, unokutyelela iDMCA. Umele usebenzise isevisi yayo yokuthabatha ukufumana imifanekiso yakho ene-copyright, iividiyo, izithuba zeblogi kunye nomxholo osuswe. Kukho iiplagizi ze-WordPress ezibandakanya iibheji ze-DMCA ezikhuselekile, kwaye unokuzifaka kwiwebhusayithi yakho ukuze uxwayise abakhohlakeleyo kunye namasela Source .